Fiarovana ny voly: tsy ampy ny teknisianina, roa na telo monja isaky ny faritra | NewsMada
Fiarovana ny voly: tsy ampy ny teknisianina, roa na telo monja isaky ny faritra
Notokanana, omaly eny Nanisana, ny Ivontoerana famongorana ny valala eto Madagasikara (IFVM) notarihin’ny filoham-panjakana Rakotovao Rivo; ny minisitry ny Fambolena, Randrianimanana Harison ; ny solontenan’ny FAO, i Patrice Talla Takoukam.
Tafiditra eto amintsika ny bibikely holitra na sababaka (chenilles légionnaires) mpanimba voly, nanomboka ny taona 2017, indrindra fa ny voly katsaka. Tsy afaka intsony izy io rehefa tafiditra ary haingam-pitombo, hita manerana ny faritra rehetra, koa izao nandraisana fepetra izao ny fomba hiadiana aminy. Ankoatra ny Ivontoerana iray any Toliara ho fiarovana ny faritra atsimo, nasiana izany ihany koa ny eto Analamanga sy ho an’ny faritra hafa.
Nanampy amin’ny fampitaovana ny laboratoara ao amin’ny IFVM ny FAO, sy fitaovana isan-karazany : moto miisa 13, GPS, finday, sy ordinatera maromaro. « Azo lazaina fa ampy fitaovana eto Madagasikara ary tokony haharitra taona maro », hoy ny solontenan’ny FAO. « Ny olana anefa, tena tsy ampy ny teknisianina miaro ny fambolena. Ao anatin’ny distrika iray, olana iray; zara raha misy roa na telo isaky ny faritra. Koa mahatonga anay mangataka ny fampitomboana ny isan’ny teknisianina izany”, hoy ny talen’ny fiarovana ny voly, i Nomenjanahary Saholy.
Ambany ny vokatra katsaka ny taona 2018
Nidina ambany dia ambany ny vokatra katsaka ny taona 2018, mbola ho toy izany koa ny amin’ity taona ity. Koa ezahina ny fiarovana ny voly, izao vao manomboka zaraina ireo fitaovana, ary arakaraka ny fomba fiasan’ny teknisianina nomena fiofanana ny hampitombo ny vokatra raha voafehy ny fampiasana ireo fitaovana sy azo antoka ny fiaraha-miasa amin’ny tantsaha. Momba izay fiaraha-miasa amin’ny tantsaha izay, nilaza ny filoham-panjakana, Rakotovao Rivo, fa tsy mora ny mandresy lahatra azy ireo, toy ny ady atao amin’ny valala, ny varroise manimba ny fiompiana tantely, sns.
Mila arindra ny ady fiatrehana amin’ireo biby ireo ho fiarovana ny fiantraikan’ny fanafody simika amin’ny olombelona, biby fiompy sy tontolo iainana. Mbola tsy afa-miala amin’io karazam-panafody io aloha isika izao na efa misy aza ny ezaka atao amin’ny fikarohana fanafody natoraly na “bio”.